Fotek Relay State Relay, fotek SSR, Omron Solid State Relay, Omron SSR, Solid State Relay, SSR
Kuyini ukuthunyelwa kombuso oqinile?
I-Relay State Relay (SSR) ingumshini ongathintana naye ohlanganisa izikhampasi ezincane, amadivaysi e-disc discrete namadivayisi amandla kagesi kagesi. Ukuhlukaniswa phakathi kwe-terminal control kanye nokugcina umthwalo kutholakala yidivayisi yokuhlukanisa. Okufakwayo kombuso oqinile osebenzayo usebenzisa isignali encane yokulawula ukushayela ngqo umthwalo omkhulu wamanje.
Ukuthunyelwa kombuso okuqinile (i-SOLIDSTATERELAYS, ngemuva kwalokhu kufingqiwe ngokuthi “i-SSR”) uhlobo olusha lokungena othintana nomshini oluhlanganisa ngokuphelele izingxenye zombuso eziqinile. Isebenzisa izici zokushintsha kwezakhi ze-elekthroniki ezifana nokushintsha ama-transistors nama-triacs. Ingakwazi ukufeza inhloso yokuvula nokuvala isifunda ngaphandle kokuxhumana futhi ngaphandle kwe-spark, ngakho-ke ibizwa nangokuthi “switch switch”. I-state enamandla elayishwayo iyisetshenziswa esisebenzayo esine-terminal esiphezulu lapho ama-terminals amabili angama-terminals wokulawula okufakwayo kanti ezinye iziphetho ziyi-terminals control terminals. Konke kokukhulisa umsebenzi wokusebenza nokuhlukanisa umsebenzi. Kufanelekile ukushayela ama-actuator-type switch-type. Inokuthembeka okuphezulu kunokudluliselwa kwamandla kagesi, futhi ayikwazi ukuthintana, impilo ende kanye nesivinini esisheshayo. Iphazamiseka kancane ezweni langaphandle. Isetshenziswe kakhulu
Iyini indima yombuso oqinile othumela?
Yize izinhlobo zezwe eziqinile ezidlulisela emakethe ziningi, ukusebenza kwazo kuyafana ngokufanayo. Ikakhulukazi iqukethe izingxenye ezintathu: ukufaka (ukulawula) isifunda, ukuhamba kwesigidi kanye nokuphuma (umthwalo) wesifunda.
Isimo esiqinile esizinikezele esifundazweni singaba nesivikelo esifushane, ukuvikelwa ngokweqile nemisebenzi yokuvikela izinga lokushisa, kanye nephakheji elihlanganisiwe lokwakha i-logic elingaqinisekisiwe likwazi ukubona amamojula ahlakaniphile adingekayo abasebenzisi futhi asetshenziswe ngokuqondile ohlelweni lokulawula. Ukuthunyelwa kombuso okuqinile kusetshenziswe kabanzi kumshini wokusebenza kwendawo yomshini, ukushisa komlilo, ukulawula ukushisa, ukulawulwa kwemoto, imishini ye-CNC, izinhlelo zokulawula ukude, amadivaysi ezishintshayo; izibani zesikhangiso, ukudilika kwensimbi, ama-scintillators, izinhlelo zokukhanyisa izibani zokukhanyisa; izinsimbi Imishini, imishini yezokwelapha, i-copiers, imishini yokuhlanza okuzenzakalelayo; ukuvikelwa komlilo okuzenzakalelayo, izinhlelo zokuphepha, kanye nokushintshwa kwamandla okukhishwa kwamandla okukhokhelwa amandla kagesi, njll, nokusetshenziswa kokusebenza kokuqhuma, ubufakazi bokuswakama umswakama kanye nokulwa nokushisa emigodini yamakhemikhali namalahle. .
Isifunda sokufakwayo sobuso obuqinile obuseqophelweni sinikeza isisindo se-signal control control, okwenza kube umthombo wokuqala wokuthunyelwa kombuso oqinile. Isifunda sokufakelwa sombuso oqinile ohanjelwayo ikakhulukazi ukufaka i-DC, futhi lowo muntu yi-AC input. Isifunda socingo se-DC sihlukaniswe ngokuphindaphindiwe sibe okokufaka okubalulekile futhi okufakwayo okwamanje. Ukulawula okwamanje okufakwayo kwesifunda sokufakelwa kokubhuka kuyahlukahluka ngokungafani ne-voltage yokufaka. Isifunda esivele samanje sokufakwayo, lapho i-voltage yokufakelwa ifinyelela inani elithile, okwamanje ayisanda kwanda ngokunyuka kwamandla. Lokhu kudluliselwa kungasetshenziswa kumkhawulo wamanani ohlangene obanzi.
Isifunda sokushayela sobuso obuqinile esifundazweni singase sihlanganise isifunda sokuxhuma, ukujikeleza nokusebenza kwesifunda. Isizinda sokuxhuma ukuxhuma, manje sisebenzisa izinhlobo ezimbili zezifomu zesifunda: i-optocoupler ne-high frequency transformer. Ama-optocouplers asetshenziswe ngokuvamile alula, i-thyristor ekhanyayo, i-light-diode array (ukukhanya-volt), nokunye okunjalo. I-transformer high-frequency ihlanganiswe ukwakha ukuzulazula okuzenzekelayo okungaba ngu-10 MHz ngaphansi komthamo othile wokufakwayo, futhi isignali ephezulu-mvamisa idluliselwa kumkhakha wesibili we-transformer ngenhloko ye-transformer. Isifunda sokusebenza singabandakanya izifunda ezihlukahlukene zokusebenza ezifana nokulungiswa kokuthola, ukuhamba ngezinyawo, ukusheshisa, ukuvikelwa, nokubonisa. Umsebenzi we-trigger wesiphakeli ukuhlinzeka isignali ye-trigger kudivayisi yokukhipha.
Isikweletu esivela esifundeni esiqinile sezwe sibona ukuvula / ukuvala ukushintshwa kombuso oqinile ngaphansi kokulawulwa kwesignali yokuqala. Isikweletu esivelayo sakhiwa ikakhulukazi idivayisi yokukhipha (chip) kanye nesifunda sokumuncwa esisebenza njengomsebenzi wokucindezela okwesikhashana, futhi ngezinye izikhathi kuhlanganisa umjikelezo wempendulo.
Izinzuzo nezimo ezimbi zombuso othunyelwe
Ukuphila okuphakeme, ukuthembeka okuphezulu: Ukuthunyelwa kombuso okuqinile akusekho izingxenye zemishini, futhi amadivaysi asezingeni eliqinile aqedela umsebenzi wokuxhumana. Ngenxa yokuthi ayikho izingxenye ezihambayo, zingasebenza ngaphansi kwesimo sokushaqeka nokudlidliza okukhulu, ngenxa yezingxenye ezakha ukuthunyelwa kombuso oqinile. Izici ezithinta izinto zithatha ukuphila okude kwezwe eliqinile futhi lithembeke kakhulu.
2. Ukuzwela okuphezulu, amandla okulawula okuphansi nokuhambisana okuhle kwe-electromagnetic: Ukuthunyelwa kombuso oqinile kunomthamo ophezulu wokufakelwa kwamandla kagesi kanye nokusebenza okuphansi kwegesi, futhi kuyahambisana ne-logic ehlanganisiwe emiphakathini ngaphandle kwesidingo sama-buffers noma abashayeli.
1. Ngemva kokuqhutshwa komshini, ukwehla kwamandla kagesi kuyisilinganiso esikhulu, umthamo ohamba phambili we-thyristor noma ukulawulwa kwe-silicon ye-bidirectional ungafinyelela ku-1 ~ 2V, futhi ukwehla kwamandla kagesi we-saturation kwe-high power transistor kuphakathi kuka-1 ~ 2V, amandla ajwayelekile I-FET Ukumelana nokumelana nakho kunkulu kunokumelana nokuxhumana koxhumana nabo.
Idivaysi ye-semiconductor ingasenayo i-current fuper of microamperes eziningana kuya kwezigidi eziningana emva kokuba ivaliwe, ukuze ukuhlukaniswa kombane kagesi kungalungile.
3. Njengoba i-tube voltage drop down, ukusetshenziswa kwamandla kanye nokukhiqiza ukushisa emva kokuqhutshwa kuyinto enkulu, futhi umthamo we-high-power relay-state relay umkhulu kakhulu kunokwesekwa kwe-electromagnetic of the same capacity, futhi izindleko ziphezulu.